Ezinsukwini ogogo bethu itiyela insipho ngokuba ubuso kwaba ethandwa kakhulu. Namuhla it is waphinda ekubeni ejenti nezokusigcoba ngokuthuthukisa isikhumba ebusweni nasemzimbeni, kanye ukwelapha nezinwele futhi dandruff. Yayiyini imfihlo yakhe, nokuthi ukuyisebenzisa kahle? Lokhu okuxoxwe ukuthi esihlokweni.
Beauticians ukuncoma hhayi ukugeza ubuso ngensipho, ngoba desiccate ke kuphazamisa ibhalansi yemvelo. Kodwa uma unquma namanje ukukhetha insipho ebusweni ke unake phezu yomsizi netiyela. Iqiniso ukuthi sihlanganisa okungenani ngo-10% birch (noma coniferous) itiyela, okuyinto isinqandakuvunda. Lokhu isithako ine anti-inflammatory futhi magciwane izakhiwo, kusiza ukubuyisela futhi wenze isikhumba. Futhi lihambisana insipho evamile, uyakwazi ukuze ome izilonda ekhona futhi micro-imifantu esikhumbeni.
Tar insipho ubuso: izakhiwo ewusizo
Uma kuziwa ekusebenziseni insipho ebusweni nentamo ke kulezi zindawo kusho ukusiza ekulweni nezinduna okungafunwa, namaqhubu nokuvuvukala. Kodwa lokhu akulona yonke impahla yayo. Kwezokwelapha, ngokuvamile insipho itiyela isetshenziswa ukwelapha ukusha kanye frostbite, ukuze ulwe nezifo ezifana izintwala, utwayi, i-eczema kanye dermatitis.
Ngo Cosmetology ebusweni itiyela insipho isetshenziswa lapho behlanza ukwelapha inkinga isikhumba.
Imithetho ugeza itiyela insipho
inqubo enjalo kuzokusiza zome induna ekhona futhi kuvimbele ukuvela emisha. Kuyaphawuleka ukuthi le nsipho ne birch itiyela efanelekayo zonke izinhlobo isikhumba, ngaphandle, mhlawumbe, ezomile. Kodwa lokhu akusho ukuthi ngeke sisetshenziswe kulesi simo, nje kudingeka silandele imithetho silula.
Ukuze ekwelapheni induna, dermatologists ukweluleka ukusebenzisa itiyela insipho ebusweni kabili ngosuku. Endabeni isikhumba esomile kuyoba ukugeza ngokwanele olulodwa kusihlwa. Ngesikhathi inqubo, musa basihlikihle ubuso bakho ngezandla zakhe sinamandla ikakhulukazi. Lather ezandleni insipho kancane futhi zisebenza izindawo ucindezelekile, kancane uhlikihla isikhumba sakho. Hashaza ngamanzi afudumele futhi qiniseka ukusebenzisa izakhi noma amafutha. Lokhu kuzokusiza ukugwema umuzwa yobunzima ebusweni.
Uma ukhathazekile ngenkinga induna akukona, kodwa uphethwe yisifo ukuqubuka amancane ezingavamile, ungasebenzisa itiyela insipho ichashaza. Ngenxa yale njongo, induna uvele ebusuku, sisebenzise insipho kancane. Ngu ekuseni, induna ngeke zome futhi uzokwazi kufihlwa njani noma ithoni ukulungiswa kusho ngaphandle kwezinkinga.
Buso kusuka itiyela insipho
The Mask ophelele kulabo abanenkinga ngesikhumba kuyingozi kakhulu. Kwenze kanje:
Soap ne zikaphayini noma birch itiyela lethusi, kufanele abe mayelana 2 wezipuni.
Soap shavings sigcwale amanzi bese usebenzisa phehla Corolla kuze Foam ukukhanya.
I Foam okuholela lufakwa ubuso, zama ukugwema ngesikhathi esifanayo isikhumba ezungeze amehlo, ngoba elingenalo amafutha ongama, futhi wena engozini ukuthola imibimbi ezingadingekile, wome isayithi. Shiya Foam imizuzu 10, engasekho.
Hashaza amanzi amaningi ekamelweni lokushisa, futhi ngisho kangcono - ukuhlela "douche".
Sebenzisa tonic, amafutha noma ukhilimu okunomsoco.
Njengoba ubona, zonke izindlela silula, kodwa ungaqiniseka ukuthi umphumela kuyokushiya umangele futhi injabulo. Zinakekele futhi uhlale amahle!
Liquid insipho "Saugella" ngoba inhlanzeko yomuntu siqu: Izibuyekezo
"Lancome" imali yenkampani. Ukubuyekeza, imibono, tiphetfo
"Golden Rose", matte lipstick: ukubuyekeza, Iphalethi, izici kanye nokubuyekeza
Amathoyizi zokufundisa izingane ngezandla zabo. Ukwenza amathoyizi
Dodge Ram 3500 - iloli noma imoto umgibeli
Marsh Mint - Izimo